यो hamsters पनीर गर्न सम्भव छ? यो डेयरी उत्पादन hamsters गर्न सम्भव छ?
धेरै मुसा एक मनपर्ने खाना पनीर छ भन्ने विश्वास गर्छन्। सबै दन्तिये र कार्टुन माउस डेयरी उत्पादन को एक विशाल टुक्रा कसरी regales देखाउँछ। हामी लोखर्के सजिलै कुनै पनि खाद्य सामाग्री गर्न सक्ने विचार गर्न accustomed छन् किनभने यो छ। मात्र कि वास्तविकता मा hamsters पनीर? यो हामी आज छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ के छ।
लगभग सबै मान्छे को एक घर मनपर्ने घरपालुवा जनावर चाहनुहुन्छ, तर आधुनिक जीवनको गति धेरै मानिसहरू सानो unpretentious फ्लफी-लोखर्के एक पिंजरे राख्न रुचि, बिरालोहरु वा कुकुर हेरचाह गर्न समय पाउन गाह्रो छ। मुसा साँच्चै धेरै विशेष मानव ध्यान र हेरविचार आवश्यक छैन, त्यसैले तिनीहरू घर थुनामा लागि यति लोकप्रिय बनेका छन्।
धेरै राम्रो वृद्धि र राम्रो स्वास्थ्य लागि, दूध धेरै पिउन डेयरी उत्पादन खान आवश्यक भन्ने विश्वास गर्छन्। यो सत्य हो, तर यो hamsters आउँदा, तपाईं शर्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो hamsters पनीर र मूल अन्य डेयरी उत्पादन खुवाउन सम्भव छ? यो प्रश्न मुसा को मालिक बारेमा निरन्तर चिन्तित छ।
Hamsters - स्तनधारी, र यो यी उत्पादनहरु तिनीहरूलाई हानि छैन भन्ने सुझाव। को लोखर्के पनीर र दूध दिन चाहे को प्रश्नको जवाफ, यो विवरण बुझ्न, र केवल त्यसपछि निष्कर्ष आकर्षित आवश्यक छ।
लाभ उठाउन वा हानि?
लोखर्के मालिक यो, एक बिरालो छैन कि दूध पिउने र यो आवश्यक छैन सम्झनुपर्छ। निस्सन्देह, म पाल्तु जनावर व्यवहार खुसी पार्न चाहन्छु। विशेष गरी दूध - यो उपयोगी उत्पादन हो! एक कृंसम्म लागि होइन।
यो केवल लोखर्के चोट जो बोसो, धेरै समावेश गर्छ, र लाभ उठाउन छैन। यी पशुहरू देखि दूध र दुग्ध उत्पादन कब्जियत कारण। सानो शरीर यो खाना पचाउन सक्दैन। तपाईं हरेक दिन एक बोसो दूध वा क्रीम दिन भने, लोखर्के लामो आफ्नो उपस्थिति तपाईंलाई प्रसन्न हुनेछ। उनले गुमाए।
सानो रकम मा दूध
को भनाइ जान्छ रूपमा, सबै कुरा सम्भव मध्यम मात्रा मा छ। तिमीलाई धेरै साना साथीको दूध रम्न गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो बासी रोटी र फिड टुक्रा moisten गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। उत्पादन कम बोसो, डेढ प्रतिशत भन्दा कुनै थप हुनुपर्छ। यो दैनिक सबैभन्दा प्रमुख बिदाको लागि लोखर्के दूध Indulge राम्रो दिनुपर्छ, र सामान्यतया। यस मामला मा राशि, न्यूनतम हुनुपर्छ।
hamsters धेरै मालिकहरूले यो उत्पादन एक कृंसम्म व्यवहार गर्न अघि, दूध अपच आफ्नो पाल्तु जनावर सुरक्षाको लागि उसिनेर गर्नुपर्छ भन्छन्।
तपाईं गर्भवती वा महिला लोखर्के हेरचाह हुनुहुन्छ भने, यो दूध को उनको सानो सर्विंग्स शरीर समर्थन गर्न एक दिन दिन सम्भव छ। podpaivanie homyachihi बित्तिकै रूपमा देखि बच्चाहरु हटाउने रोक्नु पर्दछ।
दूध संग Porridge
मान्छे को एक धेरै यो लोखर्के दूध porridge खुवाउन सम्भव छ कि छैन भनेर छक्क परे। यो असम्भव कुनै पनि मामला मा यो गर्दछ। कि porridge बाहेक दूध, अनाज को धेरै मा एक लोखर्के लागि हानिकारक छ र यो उसिनेर। मात्र खान भनेर मुसा र मुसा कच्चा अनाज, तरकारी र फलफूल छ किनभने। आफ्नो पाचन पचाउन उसिनेर गर्न, तला, सुखा र खाद्य पदार्थ धमाकेदार छाँटकाँट छैन। तपाईं लोखर्के एक लामो समय बस्ने र आफ्नो जीवन भर दूध वा पानी संग एक स्वस्थ, अनाज थियो चाहनुहुन्छ भने, यो खुवाउन सक्दैन!
पनीर र hamsters
यो hamsters पनीर गर्न सम्भव छ? यो बोसो सामग्री निर्धारण गर्छ। मुसा बस प्रोटिनको धेरै समावेश खाना खान समय समयमा आवश्यक छ। एक यस्तो उत्पादन पनीर छ।
एक पनीर hamsters आफ्नो fatness मा एक नजर हुन सक्छ कि निर्धारण गर्न। विविधता यसको कम बोसो छ भने, तपाईं पशु को लागि एक बिट तोड्ने गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो एक हप्ताको एक पटक लोखर्के द्वारा जारी छ टुक्रा, हानि छैन सूरजमुखी बीउ को राशि, र फाइदाको को यस भाग, नाघ्नु हुँदैन।
आदर्श, एक लोखर्के लागि पनीर अलग खरिद गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू सबै जो को hamsters धेरै हानिकारक छन् मसला को एक किसिम र नुन को एक उच्च सामग्री, एक उत्पादन चयन गर्नुहोस्। नुन र सामान्य मा मसला जनावर आहार मा उपस्थित हुनु हुँदैन, त्यसैले पनीर को दुबला हुनु पर्छ। तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर ससेज खुवाउन चाहनुहुन्छ जब मनमा यो राख्नुहोस्।
यो चीज Dzhungarian hamsters गर्न सम्भव छ?
सानो nimble dzhungariki मनपर्ने बन्न नस्ल hamsters धेरै मान्छे को लागि। तिनीहरूले, सबै मुसा जस्तै voracious र खुवाउन सम्म खान हुनेछ। यी बारेमा भन्न: खान छैन, त्यसपछि bitten।
जो कोहीले अझै लाभ खाना र ज्यादा को एक ठूलो संख्या, त्यसैले कडाई गर्ने गर्त सामग्रीहरू निगरानी। डेयरी उत्पादन लागि को रूप मा, Jungar hamsters अरू सबैलाई जस्तै नै कृंसम्म छन्। तिनीहरूले ठूलो परिमाणमा चीज हुन सक्दैन।
चाहे को प्रश्न मा सिरियाको hamsters पनीर, पनि, एक निश्चित जवाफ दिनुहुनेछ: को लोखर्के, र उहाँले अनाज, तरकारी, तर ठिक्क यो उत्पादन खान सक्नुहुन्छ - एक हप्ताको कुनै एक पटक भन्दा।
अन्य डेयरी उत्पादन
हामी पानी कृंसम्म दूध को संभावना बारे लेखे र यो सम्भव hamsters पनीर गर्न पाइएन। दूध बनाइएका अन्य उत्पादनहरु सन्दर्भमा, त्यसपछि गरेको तिनीहरूलाई हेरौं।
दही र सबै भन्दा कम बोसो सामग्री संग दही दूध रूपमा साथै लोखर्के दिन सक्छन्। Norma - बारे एक वर्ग सेन्टिमिटरले, हरेक तीन वा चार दिन, तर राम्रो को बस एक सानो थोपा - हरेक दुई हप्ता।
हरेक दिन, एक लोखर्के खाना प्रोटिन प्राप्त गर्न आवश्यक, यो एक ठूलो राशि curd मा निहित छ। यो उत्पादन थप 2% भन्दा बोसो हुनुपर्छ, र यो सानो रकम को रूप मा हप्तामा एक एक प्लेट कृंसम्म मा पर्न सक्छ।
प्रोटिनको उत्पादन, उसिनेर अन्डा, चिकन स्तन टुक्रा एक बिट दिइएको हुन सक्छ नुन र मसला बिना पकाएको। जई स्प्राउट्स र Mung - मुसा लागि सिद्ध प्रोटिन उत्पादन।
सल्लाह सुन्न छैन
धेरै मानिसहरू थाहा छैन कि hamsters पनीर र सकेसम्म अन्य डेयरी उत्पादन। मूलतः, तिनीहरूले यो नै माउस छ भन्ने विश्वास गर्छन्। चूहों सबै खान, त्यसैले लोखर्के पनि कुनै पनि मात्रा मा कुनै पनि खाना अनुमति दिएको छ।
मित्र सल्लाह सुन्न छैन, यो डाक्टर वा ब्रीडर एउटा प्रश्न उल्लेख तिनीहरूले मात्र एक पेशेवर जवाफ दिन सक्छन्। तिनीहरूले दूध पाचन hamsters, पनीर नोकसान पुग्छ र गंभीर कब्जियत, र अन्ततः एक पाल्तु जनावर को मृत्यु गराउँछ भन्न हुनेछ। यी उत्पादनहरू यस लेखमा अंश मा निर्धारित सीमित राख्नु पर्छ किन मुसा, को कलेजो नष्ट, र यो जनावर को विचार अप्ट आउट गर्न खानाको खुवाउन राम्रो छ। धेरै प्रोटिन र बोट खाद्य पदार्थ, र सबै आवश्यक भिटामिन र पहिल्याउन तत्व मुसा लागि विशेष फिड संग संतृप्त छन्।
भान्सा प्रकाश - यसको डिजाइन मा एक महत्वपूर्ण चरण
"Entomozan-सी": प्रयोगको लागि निर्देशन, समीक्षा। दबाइ analogues
एक स्वादिष्ट pilaf कसरी खाना पकाउनु
पकाएको क्यालोरी पास्ता वजन छिटो हानि बढावा
विशेषता लक्षण: मृगौला रोग
तपाईं कसरी चोट छिटो निको पार्न गर्न जान्नु आवश्यक छ